Sidee loo sameeyaa indhaha cagaaran - Midabkee ayaan jeclahay? | Bezzia
Susana godoy | 08/06/2021 14:00 | qurxiyo
Ma taqaanaa sida loo sameeyo indhaha cagaaran? Waxay ka mid yihiin kuwa ugu dareenka iyo xiisaha badan. Waa run in gudaheeda, waxaan sidoo kale ka heli karnaa hoos kala duwan oo cagaar ah, laakiin wali waxaan kuu deyneynaa talooyinka ugu fiican si indhahaagu ay usii xoogeystaan ​​xitaa inbadan.
Haddii aad aragto inaad isku dayeyso laakiin aadan helin natiijada laga filayo, Waxaan ku siin doonaa fikradaha ugu fiican si aad uga faa'iideysato muuqaalkaaga. Qurxinta marwalba waa saaxiibkeena ugu fiican dhammaan daqiiqadaha habeen iyo maalinba waxayna naga caawisaa inaan sii xoojino waxa aan dooneyno oo aan qarinno waxa aanan sameyn. Aan u dhaadhacno ganacsiga!
1 Sida loo sameeyo qurxinta indhaha cagaaran talaabo talaabo ah
2 Waa maxay midabka eyeliner ee indhaha cagaaran
3 Midabada hooska indhaha ee cagaaran
4 Sida loo sameeyo indho cagaaran xaflad
Sida loo sameeyo qurxinta indhaha cagaaran talaabo talaabo ah
Qurxinta indhaha had iyo jeer waa mid ka mid ah hababka aan jecel nahay inaan sameyno. Laakiin waa run oo had iyo jeer kuma habboona sidii aan ku riyoon lahayn. Xaaladdan oo kale, waxaannu kaaga tagi doonnaa tallaabo tallaabo ah oo kugu qaadan doonta wakhti aad u yar, haddaba, aan u dhaqaaqno shaqo!
Diyaarinta maqaarka waa lagama maarmaan. Sidaa darteed, xusuusnow in aad mari wax yar oo qoyaan ah wejigaaga iyo wixii ka dambeeya, aasaaska aad dooratay ama qurxinta munaasabadda. Marka ay timaado baalasha indhaha, waxaa kale oo jira astaamo hordhac ah oo ku habboon hoosku si uu midab badan u qaato una sii dheeraado.
Hadda waa inaad dooro ugu yaraan laba midab oo isku midab midab ah. Midka ugu fudud waxaan dhex mari doonaa dhamaan baalalka isha oo dhan oo si fiican ayaan u khaldami doonaa.
Midabka madow waxaan ku siin doonaa qoto dheer oo xoojinaya dhamaadka isha taasi waxay u socotaa dhanka macbudka sidoo kale waxay ku dabaqaysaa qaybta xarkaha. Laakiin haa, aaggan ugu dambeeya waanu ku khaldami doonnaa si aanay xarriiq u jirin.
Markaynu ku soo dhowaanno ilmada, midabku wuu yaraan doonaa, sidaa darteed waxaan u oggolaanay inay ka sii daran tahay xag-jirnimada kale ee aan soo sheegnay.
Markaad yeelato hooska ayaa lagaa codsaday, waa waqtigii dooro indha indheeye. Waxay noqon kartaa qalin ama dareere ah isla markaana waxaan kula jiideynaa khadka sare, kuna dhow baarkooda.
Qeybta ilmada waxaan ku siin doonaa taabashada iftiimiyaha. Aad ayuu u yar yahay, waa dhibic yar sidaa darteed indhaheennu laba jeer bay ifayaan.
Dhamaadka, waxba ma ahan sida loo codsado mascara yar si mugga isha loo siiyo.
Waa maxay midabka eyeliner ee indhaha cagaaran
Sida eyeliner, waxaad horey u ogtahay inaad ku heli karto labadaba qaab qalin, dareere ama jel. Waa run inaan marwalba raaceyno raaxadeena. In kasta oo jel ahaan aan marwalba u baahanahay inaan waxoogaa ka yara faaruqino si aysan sidaa ugu calaamadin. Laakiin taasi durba waa mid qof walba dhadhankiisa leh. Waxa aad sameysid ayaa ah inaad la joogtid midabada taagan inta badan si aad u ogaatid sida loo sameeyo indhaha cagaaran.
Midabka madow wuxuu siin doonaa xoog badan waana hagaagsan yahay haddii aad dooratay 'Indhaha Smokey'. Qaabkaas qiiqa ah ee noqon doona xiddigta habeennadii kuugu fiicnaa iyo dhacdooyinka muhiimka ah. In kasta oo haddii aad rabto dabiici badan, marwalba waad dooran kartaa eyeliner cagaaran taasi waxay xoojineysaa muuqaalka. Mid kale oo ka mid ah indhashareerka indhaha oo aadan seegi karin waa bunni. Buluug ama codad cirro leh laguma talinayo.
Midabada hooska indhaha ee cagaaran
Sidee loo sameeyaa indhaha cagaaran iyo hoosku maxay ugu habboon yihiin iyaga? Xaqiiqdii in ka badan hal munaasabad ayaad isweydiisay tan, si fiican, waxaan kuu sheegi doonaa inay run tahay in midabkan indhaha uu qaadi karo midabyo iyo midabbo kala duwan. Laakiin waxaan dooneynaa inay sii iftiimaan xitaa sababtaas darteed, wax la mid ah ma jiraan codadka dahabka ah, ee ay bunni tagto waa mid ka mid ah fikradaha ugu fiican indhahaaga. Laakiin sidoo kale casaanku waa mid kale oo ka mid ah xulafooyinka ugu fiican iyo midab casaan ah. Laakiin waa run in tan dambe had iyo jeer ay saaran tahay bushimaha qof walba. Sababtoo ah maahan cod dhammaystiran laakiin waa ay adag tahay in lagu daro qaab dabiici ah.
Sida loo sameeyo indho cagaaran xaflad
Waad codsan doontaa hadh khafiif ah oo cirro leh oo dhan isha.
Waxaad ku sameyn kartaa isbarbardhiga a hooska midabka aubergine ama cawl madow. Tani waxay aadeysaa geeska banaanka ee isha iyo illaa iyo dhexda xaggeeda, iyadoo si fiican u carqaladeynaysa.
Laga soo bilaabo bartamaha baalasha ilaa dhanka maraha, midabku mar kale wuu cadaanayaa. Iyada oo taabashada iftiimiyaha ku jirta marinka ilmada.
Gudub burush nadiif ah si aad ugu wada darto dhammaan baalasha indhaha, iskana ilaaliso dusha sare.
Sadar ku samee hooska madow oo mari mascara.
Hadda waxaad taqaanaa sida loo sameeyo indhaha cagaaran si aad ugu tixgeliso kulamadaada soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Quruxda » qurxiyo » Sida loo sameeyo indhaha cagaaran